← नेपाली लोकगीत र मानवीय संवेदना	मेरो जन्मदिन अर्थात् … … … … … मित्रता दिवस ! →	चारु मजुमदार : दक्षिण एशियाका सच्चा क्रान्तिकारी योद्धा	01
युवा चारुले माध्यमिकस्तरको पढाइ सकेर कलेज भर्ना हुने समयमा भारतीयहरू स्वतन्त्रताका लागि अरु जुर्मुराएका थिए । चारैतिर विद्रोहका झिल्का देखापर्न सुरु भएको थियो । भारतीय आकाशमा स्वतन्त्रताका सुन्दर सपनाहरू उदाइरहेका थिए । चारुको विद्रोही युवा मन पढाइतिर भन्दा मुक्तिका यी तुफानी तरंगतिर आकर्षित हुनु स्वाभाविक थियो र भयो पनि । फलस्वरुप आइएस्सीको परीक्षा चलिरहेको समय आफ्ना सारा पुस्तकहरू साथीहरूलाई बांडेर उनी कलेजबाट अचानक गायव भए । युवा चारु मनभित्रको आाधीजस्तै उर्लेको विद्रोहको निकासको खोजीमा थिए । जनताले जहां संघर्ष तीव्र बनाएका थिए, चारुको विश्वविद्यालय त्यही बन्न पुग्यो । कलेज छाडेर घुमन्ते यात्रीझैं हिाडेका उनी हालको बंगलादेशमा पर्ने पचागढमा पुगे । पचागढस्थित पृथ्वी पाठशालाको शिक्षक माधवदत्तसंग भेटेपछि उनको मनभित्रको जिज्ञासा केही शान्त भयो । दत्तबाट उनले कम्युनिष्ट पार्टी तथा रुसमा सम्पन्न अक्टोवर क्रान्तिको बारेमा जान्ने अवसर पाए । उनलाई किताबी ज्ञानभन्दा व्यवहारिक ज्ञानको बढी भोक थियो । चारुले श्रमजीवी किसानद्वारा चलाएको आन्दोलनलाई विश्वविद्यालय बनाउन आन्दोलनको महासागरमा हाम फाले र सम्पूर्ण जीवन किसान-मजदुरको मुक्तिका लागि समर्पित गरे ।
आाधी-हुरीझैं बेगवान गतिमा क्रान्तिको गौरवशाली यात्रामा होमिएका चारुको व्यक्तित्व वर्गसंघर्षकै बीचबाट खारिएर स्थापित भयो । तर उनी विवादमुक्त रहन सकेनन् । तत्कालीन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चलेको महान् बहसले प्रत्येक मुलुकको क्रान्तिकारी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वकर्तालाई या वा त्यो ध्रुवमा उभिनु अनिवार्य गराएको थियो । चारु ख्रुश्चेवी संशोधनवादको विरुद्ध जबरजस्त उभिनुभयो । यही परिवेशमा चीन-भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दै थियो । जसको कारण भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीभित्र तीव्र विवाद पैदा भयो । राष्ट्रवादको नाममा भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र छिरेका संशोधनवादीहरूले चीनविरोधी अभियान नै चलाए । चारुले त्यसको डटेर सामना गर्नुभयो । बहसको क्रममा चारुले भावावेशमा आएर भन्नुभयो ‘तपाइंहरूसंग यसबारेमा मलाई केही भन्नु छैन । किनभने म आफूलाई चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको पश्चिमबंगाल कमिटीको सदस्य ठान्दछु ।’ अन्धराष्ट्रवादको आडमा चीनविरोधी नारा उरालेर किसान-मजदुरको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यका साथ आन्दोलनमा छिरेका संशोधनवादीमाथि यो एउटा ठूलो प्रहार थियो । तर यो अभिव्यक्ति चारुलाई बदनाम गराउन चारुविरोधीहरूको लागि एउटा ठूलो हतियारसमेत बन्न पुग्यो ।
तेभागा आन्दोलनदेखि तेलंगना हुँदै नक्सलबाढी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा चारु एक लोकप्रिय व्यक्तिव्व मात्र बनेनन्, उनलाई उनको विरोधीहरूले एक विवादास्पद व्यक्तिको रूपमा उभ्याउन खोजे । आफ्नो वर्गदृष्ट्रिकोण अनुसार, उनका विरोधीहरूले उनलाई अराजकताको प्रतिकको रूपमा परिभाषित गरे । कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रवादको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका चारुको देशभक्तिको बारेमा प्रश्न उठाइयो र उनको उचाइ घटाउने प्रयास भयो । अर्काको कुर्कुच्चा काटेर आफ्नो वास्तविक उचाइ बढ्दैन भन्ने कुरालाई संशोधनवादीहरूले बुझ्न सकेनन् । राष्ट्रप्रेमको भावनालाई उजागर गर्दै चारुले लेख्नुभयो- ‘विदेशी दलाल र हत्याराहरूका विरुद्ध तीव्र घृणा पैदा गर्नु प्रत्येक भारतीयहरूको पवित्र जिम्मेवारी हो । विदेशी दलालहरूलाई खत्तम नपारेसम्म भारतीय जनताको मुक्ति सम्भव छैन ।’ उहांविरुद्ध दुस्प्रचारको लागि सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको प्रयोग भयो । उनलाई सिआइएको एजेन्टको रूपमा, जमिन्दारको रूपमा, हिंसाको पुजारीको रूपमा प्रचारित गरियो ।
पार्टी र कार्यकर्ताबारे चारु भन्नुहुन्छ
शब्द चित्रमा चारु मजुमदार + जन्म : १९१७ वनारस
+ १९७२ मा मजुमदार भारतीय सरकारद्वारा सर्वाधिक खोजी गरिएको व्यक्तिको सूचीमा + १९७२ जुलाई १६ मा कलकत्ताको भूमिगत स्थानबाट गिरफ्तार
← नेपाली लोकगीत र मानवीय संवेदना	मेरो जन्मदिन अर्थात् … … … … … मित्रता दिवस ! →	2 responses to “चारु मजुमदार : दक्षिण एशियाका सच्चा क्रान्तिकारी योद्धा”	Lunna	अगस्ट 2, 2009 at 5:38 बिहान	aali chhito bhayo
sagar pundit	अगस्ट 2, 2009 at 11:19 बिहान	CHARU MAJUMDAR KO BAREMA JANNA PAYEKO MA DHERAI KHUSHI LAGYO , DHANYABAD. YESTAI JANAKAARI HARU PAI RAKHE MA AJHAI RAMRO HUNTHYO.